Dad: Kate Middleton ee dhar cad iyo dhar dahab ah ayaa farxad weyn u ah indhaha - TELES RELAY
ACCUEIL » DADKA & LIFESTYLE »Dadka: Kate Middleton ee dharka caddaanka ah iyo dahabka ee ugu hooseeya ayaa ahaa farxad buuxda oo indhaha ah
Dadka: Kate Middleton oo dhar caddaan ah iyo dahab ah ayaa lagu farxay indhaha
Dhamaan taageerayaasha qaab-dhismeedka Kate Middleton ogow in ay jeceshahay in ay sii joogsato muxaafidka. Si kastaba ha ahaatee, Duchess of Cambridge waxay muujisay inayan ka baqin inay ka tagto aag raaxo ah waqti ka waqti.
Akhri ALSO: Laba jeer oo ku jira buluug mugdi ah! Kate Middleton ayaa ka yaabisay dharka Jenny Packham ee ay ku soo gashay 2012
Bishii Sebtembar 2012, markii ay ka soo baxday Stae Cuntada Malaysia, Duchess ee Cambridge waxay qurux badan ku jirtay dhar caddaan ah oo lagu sharraxay kaadhka dahabka ah. Dharka ayaa lahaa gacmo gaaban iyo qoorta V ee qoto dheer.
Dharka dharka dheer wuxuu ahaa mid cajaa'ib leh, wuxuuna sababay dhiiqo badan oo jajab badan sababtoo ah waxa uu lahaa qulqul aad u qoto dheer, kuwaas oo qaar badan oo idil ay sheegteen in ay yihiin qoorta ugu caansan oo ah xayawaanku waligiis uu ciyaaray. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu u muuqday mid fekeraya, oo muujinaya maqaarka Kate ee naaska.
Akhri ALSO: Xasaasiga dabiiciga ah! Kate Middleton ee Beerta Islington oo leh $ 500 Jacket iyo Gray Pants
Qalabkaasi wuxuu ahaa nuqul ka mid ah Sarah Burton, mid ka mid ah naqshadaha fannaanka ee Duchess oo ah Alexander McQueen. Sawir qaadaha dahabka ee quruxda badan wuxuu ahaa hibiscus-qaabeeya oo sharaf leh Malaysia sida ubaxa rasmiga ah.
Kate ayaa timaheeda ku duubtay nasiibkeedi oo ay ka soo gashay dahab dahab ah waxayna iyadana ka heshay dahab dahab laga soo ururiyay Catherine Zoraida.
Waxay kaloo soo bandhigtay jilbada jilicsan (Baalalkaaga Baalalkaaga) iyo hilqadaha Labaad. Jijimku wuxuu noqonayaa mid qiimo jaban oo ka baxsan 600 euros halka hilibku uu ku kacayo 115 euros. Waxay gashatay boorso dahab leh oo leh magaca caanka ah Wilbur iyo Gussie.
Tani waxay caddaynaysaa in Kate Middleton uusan ka baqeynin inuu halis galo oo uu ku jahwareeriyo dunida fashion. Waa adag tahay in aan jeclaado dareenka qumman ee esteemka!
Akhri ALSO: Dib u noqo: Kate-ka oo dharbaaxay Kate intii lagu guda jiray hawlgalkii ugu horreeyay ee boqortooyadu waa marar badan
Magaca naaneyska ee dugsiga Kate ayaa muujinaya inay mar walba ku habboon tahay inay guursato royalty
Sean Penn waa kuma? Charlize Theron waxay u dhaqmeysaa sida haday marnaba aysan wada socon - dadka